Macallin dugsi Qur’aan oo lagu dilay Muqdisho iyo taliye & xaaskiisa oo la dhaawacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xaafadda Xarayaale ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay wadaad la sheegay inuu ahaa Macallin dugsi Qur’aan, waxaan magaca macallinkaas lagu sheegay Macallin Daahir.
Dilka ayaa dhacay kadib salaaddii cishaha, iyadoo macallinka la dilay la sheegay inuu kazoo baxay masjid xilligii dilku dhacayey, waxaana dilkiisa geystay raga watay bastoolado oo aan la aqoonsan.
Dhanka kale, raga watay gaari yar ayaa weeraray guri uu deganaa sarkaal ka tirsan ciidamada nabadsugidda, kaasoo ku yaalla degmada Howlwadaag, waxaana halkaas ka dhacay is rsaaseyn sababatay dhaawaca sarkaalkaas iyo xaasikiisa.
Sarkaalkaan oo lagu magacaabo Xasan Daahir ayaa isaga iyo aafadiisa, waxa ay hortaagnaayeen aqalkooda, waxana weeraray raga watay gaari yar oo nala loo damiyey, hase ahaate bastoolad uu heystay ayuu isaga difaacay.
Raggii weerarka ku qaaday sarkaalkan ayaa goobta ka baxsaday, waxaana goobta gurmad ku yimid booliska iyo nabad sugidda degmada Howlwadaag.
Ciidamada booliska iyo nabadsugidda ayaa xiray labo wiil oo goobta lagu arkay, kuwaasoo la sheegay in dadka xaafaddu garan waayeen.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii gabar dhawaan ka qalinjebisay Jaamacad lagu dilay agagaarka xaafadda Cocacola ee degmada Yaakhshiid.